Tag: nasasho | Martech Zone
Waan hubaa in qof kastaa leeyahay mid ka mid ah macaamiisha noocan ah. Runtii waa laygu barakeeyey tobankii sano ee la soo dhaafey waxaan lahaa macmiil runtii aad ugu riyaaqey ila shaqeynta. Waan arkay sida shirkadaha qaar ula macaamilaan macaamiishooda waana necbahay. Waxaan had iyo jeer bartilmaameedsanayay heer sare oo adeeg ah. In kabadan ayaan ballanqaaday oo waan sifeeyey. Laakiin, geesh one hal macmiil… haddii aan kaliya warqad u qori karo… Macaamiisha Cayda Qaaliga ah, Dib u laabo markii aad na dooratay